Lamba fanamasoandro solon'ny solomaso
Lamba shangri-la manajamba
Lamba manafenana tantely
Fanontana ny Blackout Zebra Andro sy alina Rainbow Duo Bl ...
Sarin'ny biraon'ny birao an-tsokosoko any China Office Zebra Auto ...
China Machine Mainland Faux Linen Zebra andro roa sy ...
Shutter Window Sunscreen miendrika Spring Roller Bli ...
China Windows Sun Shade Polyester Manakodia Mamp ...
Rindrambaiko an-kalamanjana any ivelany
Manamboatra lamba famafana masoandro avy any Chine manajamba ...
Halalino ny Sunlight Filtering Sunscreen Roller ...
Namboarina ho sakany Shina Windows haingon-trano firavaka Co ...
China Manufacturer sunscreen Roller manajamba lamba Su ...
Ambongadiny Anti-UV Fiberglass lamba fidiovana ho an'ny masoandro ...
Lamba lamba jamba tsy mahataona santionany maimaim-poana
Fihodinan-damba malefaka ara-tontolo iainana Polyester Semi Blackout
2020 New Style Verman manajamba lamba 3m sakany ho an'ny birao
Verman blind lamba dia vokatra namboarina tamin'ny lamba jamba Shangri-La. Tsy mitazona ny vokatra manjavozavo ao amin'ny voaly ny lamba jamba Shangri-La, fa manana ihany koa ny fomba maody tsotra an'ny lamba venty. Ny famolavolana webbing misokatra amin'ny lamba verman blind dia mety amin'ny fanesorana vovoka isan'andro, fidinana ifotony ary asa fanadiovana hafa. Ny lamba jamba Groupeve Verman no safidy mety indrindra amin'ny tetik'asa blinds ao an-trano. Ny lamba dia mampiasa kofehy manokana ary manaraka fitsaboana amin'ny hafanana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika.
Ny fikojakojana sy fanadiovana ny lamba blindé an'ny Groupeve dia toy ny eto ambany:
1. Sotroka vovo sy fanesorana vovoka.
2. Mampiasà lamba malefaka na spaonjy lena mando amin'ny rano mafana hamafana ny lambam-baravarana mandritra ny fanesorana vovoka / sterilization. Raha ilaina dia azo ampiana detergents malefaka. Hamafa moramora hisorohana ny ketrona na manimba ilay lamba. Ny famafana dia afaka manadio ny lambam-baravarana.
3. Mampiasà vy etona hanefy amin'ny toerana tokony ho 10 sm miala ny lambam-baravarana, izay mety hisy vokany amin'ny fanesorana vovoka / fanamafisana.
Ny lamba jamba Silhouette dia vokatra namboarina tamin'ny lamba jamba Shangri-La, safidy iray hitazonana ny fiainana manokana sy fifehezana hazavana. Mihantona eo anelanelan'ireo sosona roa an'ny lamba ny lelany. Rehefa nosokafana ny jamba, dia azo jerena amin'ny efijery ny toerana mahafinaritra, ary sivana koa ny jiro miditra ao amin'ny efitrano mba hihamalemy kokoa; Rehefa nakatona ny jamba dia azonao atao ny miantoka ny fiainanao manokana nefa manasongadina ny endrika malefaka malefaka an'ny jamba Shangri-La.
Raha atao teny iray, ny lambam-pandehan'ny silhouette antsika dia safidy tsara indrindra ho an'ireo orinasa fanaovana jamba na mpivarotra ambongadiny. Azontsika atao ny manolotra santionany amin'ny lamba silhouette blinds lamba ho an'ny mpanjifanay. Ary ny horonan-damba lamba avana tsirairay dia tsy maintsy mandalo ny fitsapana kalitao alohan'ny fandefasana.
Tape tohatra maharitra Shangri-La lamba jamba 100% fahatapahana
Ladder tape shangri-la blinds lamba dia vokatra namboarina tamin'ny lamba jamba Shangri-La. Tsy mitazona ny vokatra manjavozavo ao amin'ny voaly ny lamba jamba Shangri-La, fa manana ihany koa ny fomba maody tsotra an'ny lamba venty. Ny lambam-pandriana Groupeve Ladder tape shangri-la dia afaka mitondra anao hahatsapa ho akaiky tsy manam-petra ny natiora, milamina sy faly, ary afaka mitondra anao ny fahatsapana fa mangina sy any am-paradisa. Izy io dia mizara ho tapa-tohatra semi-blackout lamba shangri-la lamba jamba sy lamba mainty tohatra shangri-la lamba jamba.
Ny akora vita amin'ny Ladder tape shangri-la lamba jamba dia polyester 100%. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
Verman blind lamba dia endrika vaovao izay manambatra ny lamba lamba, ny varavarankely ary ny venetian blind. Izy io dia manana fiasa amin'ny alokaloka sy fanaingoana ny lambam-baravarana. Ary izy io dia be mpampiasa amin'ny birao, trano, hotely, ozinina ary fotoana hafa. Ny lamba jamba Groupeve Verman dia afaka mitondra anao hahatsapa ho akaiky tsy manam-petra ny natiora, milamina sy faly, ary afaka mitondra anao ny fahatsapana mangina sy ao anaty paradisa. Izy io dia azo zaraina amin'ny lamba semi-blackout verman blinds ary ny blackout verman blinds blackout lamba.
Ny akora lamba verman blinds dia polyester 100%. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
Silhouette kanto endrika vaovao manajamba lamba 100% Blackout
Ny lamba jamba Silhouette dia endrika vaovao izay manambatra ny lamba lamba, ny varavarankely ary ny jamba venetian. Izy io dia manana fiasa amin'ny alokaloka sy fanaingoana ny lambam-baravarana.
Ny fikojakojana sy ny fanadiovana ny lamba fanaovan-jiro Groupeve dia toy ny eto ambany:
1. Ny fanadiovana ultrasonic dia mahatonga ny lamba ho mamiratra toy ny vaovao.
2. Sotroka vovo sy fanesorana vovoka.
3. Hamafa ny fanadiovana dia ny fanatanterahana fanadiovana lalina, azafady mba ampiasao mpanadio banga miaraka amina loha borosy hamafana moramora. Azonao atao koa ny mampiasa fanamainana volo (tsy apetraka amin'ny hafanana) hanapoahana ny vovoka amin'ny haingon-trano eo am-baravarankely.
Ny lambam-pandrefesan'ny silhouette antsika no safidy tsara indrindra ho an'ireo ozinina jeneraly na mpivarotra ambongadiny. Azontsika atao ny manolotra santionany amin'ny lamba silhouette blinds lamba ho an'ny mpanjifanay. Ary ny horonan-damba lamba avana tsirairay dia tsy maintsy mandalo ny fitsapana kalitao alohan'ny fandefasana.
Tape vaovao tohatra ambongadiny ambongadiny Shangri-La tsy manajamba lamba lamba
Ny ladder tape shangri-la blinds lamba dia vokatra havaozina an'ny lamba jamba Shangri-La, safidy iray hitazonana ny fiainana manokana sy fifehezana hazavana. Ny lambam-pandrefesana tohatra Groupeve shangri-la lamba jamba dia afaka mitondra anao fahatsapana ho akaiky tsy manam-petra ny natiora, milamina sy faly, ary afaka mitondra anao ny fahatsapana fa mangina sy any am-paradisa. Safidy mety indrindra ho an'ny tetikasan'ny blinds ao an-trano izany. Ny lamba dia mampiasa kofehy manokana ary manaraka fitsaboana amin'ny hafanana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika.
Ny halavan'ny horonana dia 30m, ary ny fonosana dia fantsom-taratasy mahery isaky ny horonana. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
Vidin'ny orinasa Verman manajamba ny lamba semi-blackout
Ny lamba Verman blinds dia vokatra nohavaozina tamin'ny lamba jamba Shangri-La, endrika vaovao izy io izay manambatra ny lamba lamba, ny varavarankely ary ny jamba venty. Izy io dia manana fiasa amin'ny alokaloka sy fanaingoana ny lambam-baravarana. Ary izy io dia be mpampiasa amin'ny birao, trano, hotely, ozinina ary fotoana hafa. Safidy hitazomana ny tsiambaratelo sy hifehezana hazavana.
Ny akora lamba verman blinds dia polyester 100%. Ny halavan'ny horonana dia 30m, ary ny fonosana dia fantsom-taratasy mahery isaky ny horonana. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
Tape tohatra avo lenta Shangri-La Blinds Fabric 100% Polyester
Ladder tape shangri-la blinds lamba dia endrika vaovao izay manambatra ny lamba lamba, ny varavarankely ary ny jamba venty. Izy io dia manana fiasa amin'ny alokaloka sy fanaingoana ny lambam-baravarana. Ary izy io dia be mpampiasa amin'ny birao, trano, hotely, ozinina ary fotoana hafa. Safidy hitazomana ny tsiambaratelo sy hifehezana hazavana. Rehefa nosokafana ny jamba, dia azo jerena amin'ny alàlan'ny efijery ny toerana mahafinaritra, rehefa mikatona ny jamba dia azonao atao ny miantoka ny fiainanao manokana.
Ny lamba dia mampiasa kofehy manokana ary manaraka fitsaboana amin'ny hafanana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika. Ary ny akora vita amin'ny tohatra shangri-la lamba jamba dia polyester 100%. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
Verman blind lamba dia vokatra namboarina tamin'ny lamba jamba Shangri-La, manambatra ny lamba lamba, ny varavarankely ary ny jamba venty. Manana fiasa amin'ny alokaloka sy fanaingoana ny lambam-baravarana izy io, izay mahatonga azy io ho safidy tsara hitazonana ny fiainana manokana sy hifehezana hazavana. Ny lamba jamba Groupeve verman dia afaka mitondra anao fahatsapana tsy manam-petra akaikin'ny natiora, milamina sy faly, ary afaka mitondra anao ny fahatsapana mangina sy ao anaty paradisa.
Ny lamba dia mampiasa kofehy manokana ary manaraka fitsaboana amin'ny hafanana avo lenta, izay mateza ary tsy mihetsika. Ny akora lamba verman blinds dia polyester 100%. Manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifa rehetra izahay, azonao atao ny manamarina kalitao sy mifantina loko mivantana alohan'ny filaminana. Ankoatr'izay, ny volonay dia manankarena loko ary manaraka ny fironan'ny lamaody iraisam-pirenena.
2020 Fomba fanamoriana lamba Triple Layer vaovao
Ny lamba vita amin'ny groupeve telo sosona dia miavaka amin'ny endriny sy tsara bika. Ny fampifandraisana lamba marindrano eo anelanelan'ny lamba roa dia afaka mitazona ny efitrano malemy. Avadiho ny lelany mba hanitsiana ny hamafin'ny jiro. Ny lamba mihaja tsy manam-paharoa dia afaka mitazona ny loko tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra. Alokaloka matanjaka. Ny fanadiovan-damba amin'ny ultrasonic dia azo ampiasaina hanamboarana ireo lamba mamiratra toy ny vaovao.
Raha ny toetran'ny lamba sosona telo dia azo zaraina ho lamba telo sosona ary lamba mainty telo sosona. Ny akora vita amin'ny lamba telo sosona dia polyester 100%. Groupeve dia manana traikefa mihoatra ny 16 taona amin'ny fanamboarana ny lamba firakotra tsara sy avo lenta.
Akanjo namboarina Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
Shangri-La blinds dia endrika vaovao manambatra ny lambam-baravarankely, ny varavarankely, ny venty ary ny roller roller. Ny jamba Shangri-La eny an-tsena dia tsy maintsy mampitaha toetra roa mavesatra: ny mazava sy ny fahalemena. Ny fahazavana dia hita taratra indrindra amin'ny hateviny, ny firafitra ary ny akoran'ny kofehy ao amin'ny faritry ny harato. Rehefa nosokafana ilay jamba Shangri-La mazava tsara, ny hazavana miditra ao amin'ilay efitrano dia be sy malefaka kokoa; rehefa nakatona dia afaka manafina tsara ny fiainana manokana ihany koa. Ny haavon'ny sisin'ny volo dia hita taratra indrindra amin'ny haavon'ny polymerization ny harato sy ny ampahany matevina amin'ny kofehy.
Ny lamba manafatra Groupeve shangri-La avo lenta dia mahazaka herin-kery lehibe, ary tsy hamokatra burrs mavesatra kokoa amin'ny fampiasana isan'andro. Raha fintinina, rehefa misafidy lamba dia mba diniho tsara ny kalitao, amin'izay vao afaka misafidy lamba lamba shangri-la izay mahafa-po, mahazo aina ary azo antoka.
Tapitra tsy fahampian-jiro Shangri-La Blind Fabric
Shangri-La blinds dia endrika vaovao manambatra ny lambam-baravarankely, ny varavarankely, ny venty ary ny roller roller. Ny ain'ny serivisy lamba lamba shangri-la dia somary lava, mahatohitra ny mari-pana ambony sy ny hatsiaka ambany noho ny toetrany manokana. Amin'ny ankapobeny, ny olan'ny fihenan'ny fiainam-panompoana noho ny hafanana ambany dia tsy mitranga any amin'ireo faritra misy tara-masoandro lava na maripana ambany. Amin'izany fomba izany dia mitatra be ny ain'ny serivisy an'ny Shangri-La.
Raha tsara ny tontolo iainana anaty trano, ankoatry ny fianjerana isan'andro sy ny fanadiovana vovoka kely amin'ny lamba, dia mety hahatratra ny vokatry ny fampiasana mihoatra ny 10 taona.
Adiresy: No.1098 Fizarana afovoan'ny Jiannan Avenue, High-Tech. Zone, Chengdu, Sina